Paikady ahazoana mpamaky ho an'ny bilaogera vaovao | Martech Zone
Zoma, Martsa 30, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mila fahasahiana kely vao manolo-tena hanoratra bilaogy. Mivoaka amin'ny Internet ianao miaraka amin'ny firaketana an-tsoratra ny eritreritrao sy ny hevitrao. Io mangarahara io dia manokatra anao amin'ny fihomehezana eo noho eo na, aorian'ny asa mafy ataonao, onjan'ny fanajana. Raha ny tena izy dia napetrakao eo amin'ny laoniny ny lazanao - izay mety ho anjaran'ny mpiasa amin'ny ho avy dia mety ho voafitaka noho ny hadisoana tokana. Mahatalanjona!
Mametraka ny bilaoginao amin'ny Bilaogera, TypePad or WordPress (Soso-kevitra). Avy eo ianao dia mipetraka ary mieritreritra ilay lahatsoratra bilaogy voalohany… hevitra an-jatony no mihodina ao an-tsainao. Ahoana no hanombohanao? Milaza amin'ny olona aho mba hanao izany fotsiny ary hamita izany. Natomboko tamin'ny a Aza adino ny dokam-barotra Mountain Dew ho an'ny sakafo maraina. Amin'ny alàlan'ny hafatrao voalohany, raha tsy anarana fantatra ianao dia manomboka amin'ny aotra tsy izy ary angamba, mpamaky aotra.
Raha mba fantatro mantsy izay fantatro izao dia mety ho hafa kely ireo lahatsoratra vitsivitsy manaraka. Tsy manenina amin'ny làlana nalehako aho, saingy azo antoka fa afaka nahazo mpamaky vaovao haingana kokoa. Tsy nifantoka tamin'ny mpamaky aho fa niezaka ny ho zatra nanoratra isan'andro fotsiny na hahatsapa an'izany. Ny làlana tsara kokoa azoko naleha dia ny manoratra valiny lehibe amin'ireo lahatsoratra bilaogy hafa. Efa namaky bilaogy maro aho talohan'ny nanombohako fa tsy niditra tamin'ny resaka. Raha nanao an'izany aho, mpitoraka bilaogy maro kokoa amin'ny ny lazany dia mety namaky ny bilaogiko ary mety nampiroborobo ny asa soratro.
Toro #1 Miaraka amin'ireo lahatsoratra vaovao, manorata lahatsoratra vitsivitsy hafa ato amin'ny tontolon'ny bilaogy hanombohana ny mpamaky anao. Aza hadino ny mampiasa Trackbacks.
Aorian'ireo hafatrao vitsivitsy voalohany, manasà (manome tsolotra, mitaky, mangataka, mandrahona) ny namanao hamaky sy hanome hevitra momba ireo hafatrao. Ny fanehoan-kevitra dia manome ny fahatokisana bilaogy iray satria manome ho an'ny mpamaky ny fahatsapana ny hevitry ny mpamaky anao momba ny tranokalanao ARY mendrika ny haneho hevitra ny bilaoginao. Raha fantatrao ny bilaogera hafa dia amporisiho izy ireo handinika ny bilaoginao ho anao ary manipy 'fitiavana am-pitiavana' ho anao.
Toro #2 Manamboara fanamarihana vitsivitsy ary miezaha haka trackback avy amin'ireo bilaogera fantatrao.
Tsara izany, nankany amin'ny salon hatsaran-tarehy ianao ary nampihety ny volon-koditra tsara, fa tonga ny fotoana hiakanjoana sy hampisehoana ny ando vaovao! Arotsaho ao anaty tranokala sy tranokala fanoratam-boky sosialy ianao. Rehefa nanampy an'i JD aho handefa ny bilaoginy, Mainty amin'ny orinasa, Nahazo an'i JD hiditra ao amin'ny MyBlogLog aho ary avy eo namoaka ny bilaoginy tamina tranonkala marobe fanoratam-boky sosialy, voalohany indrindra StumbleUpon. StumbleUpon dia tsy mitaky poste tena laharana - azonao atao ny mampihatra famaritana sy tenifototra vitsivitsy. Ireo mpampiasa StumbleUpon manana fahalianana mitovy amin'izany tafintohina eo amin'ny bilaoginao ary maro no hifikitra noho ny tombontsoa iraisana.
Toro #3 Araraoty ny tambajotran-bilaogy sasany sy tranokala fanoratam-boky sosialy.
Rehefa manohy manoratra ianao dia aza hadino izany hadihadio ny atiny. Hanome anao ny hevitrao momba ny lahatsoratra izay hitan'ny mpitsidika indrindra ary koa ny lahatsoratra misy ny fiantsoana betsaka indrindra. Miaraka amin'ny fijerinao ireo hevitrao dia afaka mahazo sarin-dàlana hitondrana ny atin'ny bilaoginao ianao izao. Amboary (diovy ny ao anatiny), sasao (araraka ny fako) ary avereno. Tohizo ny fanaovana azy ary lahatsoratra 500 aorian'izay dia tsy hino ny halaviranao ianao.
Toro #4 Mandroina, manasa, mamerina.
Soso-kevitra farany: Sorohy ny banga any. Ity misy fitsipiky ny ankihibe: ny tranokala 'Top Blogging' izay mitaky fametahana badge, sora-baventy na sary hafa dia aza manalavitra izany. Tsy misy fanamboarana haingana ny bilaogy. Mila fotoana ny laza laza, mitaky fotoana ny fananganana mpamaky boky ary mitaky fotoana ny fananganana ny 'fahaizanao mahita' amin'ny motera fikarohana. Sorohy ny tranonkala fitorahana bilaogy izay hampiakatra ny laharan'ny bilaoginao amin'ny alàlan'ny fametrahana sary eo amin'ny bilaoginao.
Toro #5 Aza asiana sary eo amin'ny tranokalanao izay manao dokam-barotra tsotra fotsiny momba ny fanangonana bilaogy tsy mahay manome anao momba anao.
Mar 31, 2007 amin'ny 3: 25 AM
Ny fialan-tsoa tsara dia fomba iray tsara hanovozana mpamaky - ianao no voalohany naneho hevitra tao amin'ny bilaogiko ary izaho dia mpamaky tsy tapaka ny bilaoginao hatrizay. 😉
Torohevitra iray indray azoko zaraina dia ny fanomezana anao bilaogy endrika sy fahatsapana miavaka - aza atao sarotra loatra, mampidi-doza ny mampiasa plug-in be loatra izay manampy fiasa mahafinaritra. Ny ankamaroan'ireo endri-javatra ireo dia manampy voalohany rehefa mahazo lahatsoratra marobe ianao.
Araka ny efa nolazain'i Doug teo aloha dia manaova karazana fanentanana hitazomana ny mpamaky ao amin'ny bilaoginao; maro no tonga amin'ny alàlan'ny motera fikarohana, ary mety tsy hamaky afa-tsy fidirana tokana. Raha toa kosa ianao ka mampiseho lahatsoratra mifandraika amin'ny faran'ny lahatsoratrao dia mety hijanona ela kokoa izy ireo, ary hiverinaKoa!
Mar 31, 2007 amin'ny 9: 11 AM
Tsara izany torohevitra izany! Tsy tsapako hoe izaho no voalohany naneho hevitra momba anao… tena mahafinaritra izany! Tiako ny mamaky ny bilaoginao!
Mar 31, 2007 amin'ny 4: 46 AM
Torohevitra mahatalanjona ho an'ireo bilaogera vaovao Doug.
Manaraka izay rehetra nosoratanao aho.
Torohevitra iray hafa:
Aza kivy! Indraindray dia ho tsapanao fa miresaka amin'ny rindrina friggin ianao. Aza matahotra fa mihaino / mijery ny olona na dia tsy mamaly aza. Tohizo izany!
Ny $ 0.02 fotsiny
Mar 31, 2007 amin'ny 9: 14 AM
Vola mitentina iray tapitrisa dolara izany, 0.02 $, Tony! Miahiahy ireo bilaogera rehefa tsy mahazo valiny betsaka… fa ny tena marina dia ny 98% ka hatramin'ny 99% (ara-bakiteny… efa namaky statistika vitsivitsy aho) ny olona mitsidika ny bilaoginao dia tsy hamela hevitra velively. Ka tsarovy fa mamaky ny olona ary manao asa tsara ianao!
Marathon fa tsy haingam-pandeha.
Doug, tena zava-dehibe ny fanohananao ary raha tsy nisy ny fitarihanao dia nitolona aho. Ny tiana holazaina dia hoe, manampy amin'ny fiandohana ny fananana olona manana traikefa bebe kokoa hanampy anao hahatakatra fa mandeha tsara ianao na manao hadalana. Mikasika ireo tranokala tambajotra, manaova hevitra amin'ny tranonkala hafa ary ampahafantaro ny tenanao. Mandefasa amin'ny hafanana ary mandehana any amin'izay itondran'ny fonao anao. Manana bilaogin'ny orinasa aho fa naneho hevitra momba ny politika ara-panatanjahantena ans.
Ny mpampianatra ahy sy ny maodely azoko dia Doug Karr, isa 3000 eo amin'izao tontolo izao. Mahafinaritra ny mijery ny bilaoginy mahazo mpamaky amin'ny taha mahavariana.
Misaotra, JD! Heveriko fa mora kokoa ny asan'ny mpanazatra rehefa manana superstar hiara-miasa aminy izy!